एचआइडिसिएलले पुँजी बढाउँदै, माघभित्रै हकप्रद सेयर जारी गरिने
२२ अर्ब पुँजी पुर्याउने तयारी
| 2019-01-16 Published
निर्माण सञ्चार, हाइड्रो–ऊर्जा । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) ले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न कम्पनीको ७औं वार्षिक साधारणसभामा यसबारे प्रक्रिया नै अघि बढिसकेको जानकारी दिइएको थियो ।
योसँगै कम्पनीले चुक्ता पुँजी २२ अर्ब रुपियाँ पुराउने छ ।
कम्पनीका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग परामर्श तथा स्वीकृति लिएर माघभित्रै सेयर जारी गर्ने तयारी भएको छ ।
गएकै वर्ष सर्वसाधारणका नाउँमा पनि साधारण सेयर निष्कासन गरेको कम्पनीको यतिबेला १० अर्ब रुपियाँ पुँजी पुगेको छ भने गत आर्थिक वर्ष ९२०७४-७५० को आम्दानी तथा नाफाबाट कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर ९एक अर्ब रुपियाँ बराबर रकम० दिने निर्णय गरेको छ ।
कम्पनीको भनाइ अनुसार योसँगै कम्पनीको पुँजी ११ अर्ब पुग्ने छ । यसमा एक बराबर एक हकप्रद सेयर निष्कासन गरेपछि पुँजी २२ अर्ब रुपियाँ पुग्ने बताइएको हो ।
हकप्रद सेयर जारीपछि संस्थापक पुँजी १७ अर्ब ६० करोड र सर्वसाधारणको ४ अर्ब ४० करोड रुपियाँ हुने कम्पनीको भनाइ छ ।
नाफमा, गत वर्ष आम्दानी कति ?
कम्पनीले जनाए अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा उसले झन्डै १ अर्ब रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म उसको खुद नाफा ३७ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
५ वर्षीय योजनाले कहाँ पुर्याउँदै छ एचआइडिसिएललाई ?
कम्पनीले गएको वर्ष ४ वर्षी बिजनेस गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
१ वर्ष पूरा गर्दा नगर्दै उसले आफूलाई एक कदम अघि बढाउन सकेको देखिन्छ । उसको ‘भिजन’ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८-७९ सम्म ३ हजार २ सय ३८ मेगावाटका आयोजनामा ३६ अर्ब २६ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको थियो ।
चालू आवको कात्तिकसम्म ५ सय ७९ मेगावाटका आयोजनाहरुमा उसले झन्डै साँढे २ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरिसकेको छ भने सोही अवधिमा करिब ३५ करोड रुपियाँ बराबर स्वपुँजी पनि लगानी गरिसकेको छ ।
फुकोटमा स्वपुँजी, थप कहाँ कहाँ लगानी ?
हाइड्रो विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको कर्णाली क्षेत्रमा पनि एचआइडिसिएलले लगानी अघि बढाइरहेको छ ।
यसैबीच कम्पनीले ४ सय २६ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा १ अर्ब २६ करोड रुपियाँको स्वपुँजी लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त आयोजनाको कूल पुँजी मध्ये १० प्रतिशतले आउने रकम कम्पनीको लगानी रहने छ ।
यस अघि नै कालीकोटमा पहिचान भइसकेको उक्त जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण कार्य अघि बढाएको हो ।
यस्तै, कम्पनीले जनाए अनुसार एचआइडिसिएलले ७१.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ५३.७ मेगावाटको सिम्बुवा खोलामा पनि ५१/५१ प्रतिशत सेयर राख्ने भएको छ ।
बुधबार, २ माघ, ०७५